Iindaba - South China Beauty Expo
Ugxininise kwiintsingiselo zamazwe ngamazwe, ubuchwephesha obuphezulu kunye neendlela zoyilo, kunye neemfuno ezintsha zabathengi besizukulwana esitsha, iSouth China International Beauty Fair imisele iindawo ezikhethekileyo zemiboniso ezifana nobuhle obutsha bentengiso, i-e-beauty, indawo ye-trend, uphawu olutsha. indawo, ubuhle bommandla we-IP kunye nezinye iindawo ezishushu ezifana nesizukulwana se-Z, ukuthengisa okutsha, ukuphuculwa kokusetyenziswa kunye ne-IP ewela umda. Lo mboniso uya kunceda abaqhubi ukuba bembe kumathuba entengiso yobuhle be-B2B kwiSithili saseDawan, bandise imephu yeshishini, bakhuthaze ukwenziwa kwezinto ezintsha, kwaye ngokudibeneyo benze ixesha elitsha loshishino lobuhle kwisithili saseDawan.
• Phonononga amathuba emarike yorhwebo lobuhle lwe-B2B, ukwandisa indawo yoshishino
• Zibandakanye kwifashoni yamazwe ngamazwe, ubuchwepheshe obuphezulu, iindlela zoyilo, kunye neemfuno ezintsha ezivela kwizizukulwana ezitsha zabathengi
• Hlanganisa izibonelelo ezininzi zekhonkco leshishini lobuhle
• Ukuzuza indibaniselwano yokuveliswa kwezinto ezintsha kunye nokwabelana ngamathuba oshishino lwehlabathi
I-Shanghai MEICET iza kujoyina i-South China Beauty Expo kwi-Shenzhen Convention & Exhibition Centre ukusuka nge-30 kaJulayi ukuya ku-1 ka-Agasti ka-2020.
Umboniso wokuqala wobuhle obuchwepheshile kwiNgingqi yaseGreater Bay ngo-2020.
Kulo mboniso, ethandwayo MC88 series Skin Analyzer Isixhobo kwaye Umatshini wokuhlalutya umzimba iya kuboniswa.
Umhlalutyi woMzimba we-Meicet usebenzisa itekhnoloji ye-BIA, isiphumo esibandakanya uHlalutyo loBume boMzimba i-TBW, i-IBW, i-BMI, i-WHP, uHlalutyo loBume boMzimba, uHlalutyo lokutyeba, uHlalutyo lwe-Segmental & Fat Analysis njl, Ilula, iKhawulezayo, ichanekile. Indawo eSebenzayo yiGym / iSibhedlele / iZiko lokuValelwa / iZiko loLawulo loMzimba / Isaluni yobuhle / iZiko lokuVavanya uMzimba
Booth:3B07 ngoku silinde wena.